Tusaalooyinka liiska makhaayadaha | Hal-abuurka Online
Tusaalooyinka liiska makhaayadaha
Ma haysaa mashruuc aad ku samaynayso liiska makhaayadaha? Waxaa laga yaabaa inaad tahay Raadinta qaar ka mid ah talooyinka si aad u soo bandhigto liiskaaga oo aad la yaabto martidaada faahfaahinta koowaad? Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay tusaalooyinka menu-yada makhaayadaha. Waana ku caawin karnaa.
Waxayna tahay, rumee ama ha rumaysan, liiska makhaayadda waa mid ka mid ah faahfaahinta ugu muhiimsan, iyo in dadka intooda badan ay iska indhatiraan marka ay bilaabayaan ganacsigooda. Markaa haddii ay taasi kugu dhacdo, waanu kula hadli doonaa oo ku siin doonaa tusaaleyaal.
1 Waa maxay sababta liiska makhaayadda uu aad muhiim ugu yahay
2 Talooyin hore si aad u samayso naqshad menu makhaayad wanaagsan
3 Tusaalooyinka liiska makhaayadaha
3.1 Liiska liiska makhaayadaha ee 3D
3.2 Dejinta liiska
3.3 Qaabka dukaanka qaxwada
3.4 Buug-yaraha menu
3.5 Maro miis ah
4 Sida loo sameeyo menus makhaayadda
Waa maxay sababta liiska makhaayadda uu aad muhiim ugu yahay
Ka soo qaad inaad tagto laba makhaayadood oo kala duwan. Labaduba waa isku qiimo, waana isku qaab. Si kastaba ha ahaatee, markaad timaaddo mid waxay ku siinayaan liis aasaasi ah oo ah waxay haystaan ​​sida inay tahay liis leh qiimahooda. Dhanka kale, midda kale ayaa kuu soo bandhigaysa iyada oo lagu kala soocay suxuunta, xulashada khudradda iyo sidoo kale waxay muujinayaan suxuunta ugu fiican ee sawirada. Jaleecada hore, maxaad jeclaan lahayd in ka badan kan labaad?
Un menu makhaayad waxay caawisaa in wax badan la iibiyoSababtoo ah waxaad qofka ka dhigtaa inuu "jacayl ku dhaco" wuxuu arko oo xitaa waxaad ka dhigi kartaa inuu cuno cunto badan, taas oo ugu dambeyntii kuu noqon doonta faa'iido badan.
Caadi ahaan, kaadhadhka menu waxa la cusboonaysiiyaa hal mar sanadkii, had iyo jeer bilowga sanadka waxaana la hayaa bilaha soo socda oo dhan (haddii aysan jirin isbeddello ama ay haystaan ​​noocyo kala duwan oo ku xiran xilliga ama si loo xoojiyo muuqaalkooda). Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la helo dhowr tusaale oo ka mid ah menu-yada makhaayadaha, si loo awoodo in la beddelo marka loo baahdo iyada oo aan laga bilaabin meel eber ah.
Hadda maxaa kale oo ay muhiim u yihiin? Sababtoo ah waxay sameeyaan aragti wanaagsan? Runtii maaha. Sidoo kale waa sababtoo ah iyaga waxaad ku muujin kartaa suxuuntaada ugu fiican, oo leh sawirro sawir leh; ama u dhig liiska hab asal ah oo ka caawiya qofka qadeeya inuu dareemo inuu joogo makhaayad ka duwan kuwii uu wakhtigaas joogay.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadalnaa kala duwanaansho isla markaana ah xirfad shaqo oo wanaagsan.
Talooyin hore si aad u samayso naqshad menu makhaayad wanaagsan
Kahor intaadan u dhaqaaqin inaan ku siiyo xoogaa tusaaleyaal menu makhaayad Waxaan rabnaa inaan kuu dhaafno talooyin aad maskaxda ku hayso, ma aha oo kaliya inaad doorato qaab-dhismeedka, laakiin sidoo kale markaad soo bandhigto macluumaadka makhaayadda.
Iyo, mid ka mid ah talooyinka ugu fiican ayaa ah in had iyo jeer la dhigo meesha ugu sareysa, iyo boggaga aan fiicnayn, suxuunta ugu faa'iidada badan. Waa maxay kuwaas? Hagaag, kuwa kuu keena faa'iido badan (ama sababtoo ah waxay si dhib leh ugu baahan yihiin maaddooyinka, ama sababtoo ah waxay ku sameeyeen alaab cayriin ah oo aad u jaban). Sidan ayaad u hubisaa inay tahay waxa ugu horreeya ee ay arkaan.
Sidoo kale, suxuunta "xiddigga" waa inay la yimaadaan sawirro si ay "indhaha uga soo galaan" dadkuna waxay ka dhursugayaan waxay arkeen iyo sida ay u wanagsan yihiin.
Isticmaalka kaadhadhka liiska asalka ah waa talo kale. Iska daa kuwa dhaqanka oo sharad kuwa kale oo casri ah, sida xarrago leh ama qaabka carruurta u dhintaan kuwa yaryar (wax aan makhaayado badan haysan oo noqon kara hab aad naftaada kaga soocdo tartankaaga).
Oo hadda waxaan dooneynaa inaan aragno tusaalooyin menu-yada makhaayadaha. Kuwii aan horey kuu siinay, kan dhimasha-goynta, ama menu-ka dadka waaweyn ama midka carruurta, waxaan ku dari karnaa kuwan soo socda:
Liiska liiska makhaayadaha ee 3D
Iyadoo la tixgelinayo in mar kasta 3D ay ku jirto nolol maalmeedkeena, kiiskan ma noqon doono mid aan macquul ahayn in lagu dabaqo liiska makhaayadaha.
Kaliya ma caawiso Cunayayaashu waxay taabtaan liiska iyo dareenka taabashada waa la hawlgeliyay, laakiin waxa ay sidoo kale saamaynaysaa in ay si badan u eegi doonaan xarafka oo ay waydiisan karaan wax ka badan.
Xaaladdan oo kale waxaan ku siinaynaa tusaale template ah horay loo sameeyay kaas oo aad ka heli karto afar faylal PSD ah iyo afar kale oo AI ah oo leh wax ka beddel dhammaan qoraalka iyo sawirada iyadoo liiska la bixiyay.
Dabcan, bilaash maaha ilaa ay jirto wax soo jeedin wakhtiga aad gasho isku xirka.
Qaabka dukaanka qaxwada
Inkasta oo aan had iyo jeer ka fikirno menu oo si toos ah ula xiriirno makhaayad, waxay sidoo kale noqon kartaa inay ahayd a kafateeriyada bixisa quraac iyo cunto fudud. Dabcan, waa inaad ka dhigtaa mid qurux badan.
Markaa halkan waxaad haysataa tusaalahan halkaas oo ay nagu xasuusinayso xoogaa naqshadaynta canabka ah iyo, isla markaana, casri ah.
Sida aad ogtahay, makhaayado badan ayaa caan u ah menu waxa lagu soo bandhigay bog dhamaystiran, hore iyo gadaal, laakiin halkii ay ku siin lahaayeen sidaas oo kale, waxay u rogaan seddexleey.
Oo halkan waxaad haysataa template kaas oo aad ka heli karto naqshad qurux badan oo leh suurtogalnimada in lagu saxo faylasha.
Waad ka soo baxaysaa Halkan.
Maro miis ah
Ma qiyaasi kartaa in ay ku dhejiyeen maro miis oo kani uu ahaa kaadhka menu? Hagaag, haa, maaha in ay tahay fikrad asal ah, sababtoo ah waxaan ognahay in ay jiraan makhaayado, gaar ahaan cuntooyinka degdega ah, kuwaas oo isticmaala, laakiin waxay noqon kartaa mid xiiso leh makhaayadaha noocaas ah ama kuwa ka sii casrisan.
Sida loo sameeyo menus makhaayadda
Hubaal qaar ka mid ah kuwa aan kuu sheegnay inay jeclaysteen, sax? Hagaag, waa inaad ogaataa inay jiraan noocyo badan oo menu-ka cuntada ah oo aad isticmaali karto, labadaba bilaash iyo lacagba. Kuwaas waxaa lagu gartaa soo bandhigida naqshadeynta iyada oo aan laga bilaabin xoqin. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa ku dar macluumaadka iyo sawirada aad dooratay, samee wax walba oo wanaagsan oo u daabac maqaayadaada.
Marka lagu daro qaab-dhismeedka aad ka heli karto internetka, sidoo kale Waxaad isticmaali kartaa Canva, maadaama ay leedahay waxyaabo badan oo la xiriira liiska makhaayadaha, iyo sidoo kale Adobe Spark Inkastoo aysan lahayn tiro badan, waxaad si fudud u abuuri kartaa kaaga adoo raacaya tillaabooyinka ay ku siinayaan.
Hadda oo aad ogtahay sida loo sameeyo kaarka menu-ka oo aad haysatid tusaalayaal ka mid ah menu-yada makhaayadaha, kaliya waa inaad waqti yar ku bixisaa si aad u hesho moodooyinka ku habboon ganacsigaaga, ama mashruuca aad gacanta ku hayso oo aad u soo bandhigto macmiilkaaga. Tani waxay kaa badbaadin doontaa wakhti oo waxaad xitaa samayn kartaa wax ka beddel si aad u abuurto xaraf kuu gaar ah si dhakhso leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Tusaalooyinka liiska makhaayadaha